प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ चैत २०७५)
कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ९ करोड ५ लाख नाफा कमाएको छ भने चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७८ करोड छ । बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी अझै पुगेको छैन । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । अपुग रकम बोनस शेयर जारी गरेर पुर्‍याइने कम्पनीले बताएको छ । ६१ दिनको कारोबार अवधिमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी मूल्य रू. ५ सय २० पुगेको छ भने न्यून मूल्य रू. ४ सय २३ छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म ३ हजार १ सय ४२ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग र २ हजार ५ सय ८१ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-04-07 - 109 view(s) - abhiyan